बलिउड अभिनेत्री महिमा चौधरी आफूलाई गोर्खाली भन्न मन पराउँछिन्, बोल्छिन् यति राम्रो नेपाली (भिडियोसहित) « Etajakhabar
all of the most well-known rolex replica around the world.
अन्ततः माधव नेपाल समूहका सांसदले राजीनामा नदिने
काठमाडौँ — नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले संसदमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेको छ । सोमबार
ओलीको चलाखी ! ट्वीटर मार्फत माधव नेपाललाई दिए यस्तो सन्देश
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल समुहलाई अप्ठेरोमा पार्न चलाखी अपनाएका छन् ।
बिहेमा सालीले बेहुलाको जुत्ता लुकाउदा पैसा नदिने बेहुला पक्षलाई यसरी थ र्काएको भिडियो बन्यो रातारात भाईरल , हेर्नुहोस बिहेमै पर्यो यस्तो ल फ डा (भिडियो)